Matt Baugh oo ka hadlay Soomaaliya - BBC News Somali
Matt Baugh oo ka hadlay Soomaaliya
17 Maajo 2011
Image caption Matt Baugh wakiilka sare ee Britain u qaabilsan Somaaliya
Wakiilka sare ee Britain ugu qaabilsan Somalia Matt Baugh, oo waraysi gaar ah siiyey BBC ayaa waxaa uu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin khilaafka ku aadan muddo kordhinta DKM, dagaalka lagula jiro Al Shabaab iyo sababta ay UK u daneynayso in ay safaarad uga furato Somalia haddii xaalada wannaagsanaato.
Waxaa waraystay weriyaha BBC Mohammud Ali oo kula kulmay xafiiskiisa magaalada Nairobi.
Matt Baugh, oo xilkan loo magacaabay bartamihii sannadkii tagay, markii ugu horaysayna waraysi gaar ah siiyey BBC ayaa waxaa uu si gaar ah uga hadlay khilaafka dhax yaala hay'adaha dowladda ku meel gaarka ee Somaalia khilaafkaas oo soo jiray tan iyo markii la magacaabay guddi barlamaani ah oo loo saaray in uu ka soo shaqeeyo doorasho la qaban doono ka hor bisha August oo ah waqtiga uu ku egyahay xillliga Dowladda ku meel gaarka ee Soomalia.
Waxaana la isku hayaa oo muran xooggan dhalisay inta ay gaarsiisantahay muddada loo kordhinayo dowladda ku meel-gaarka iyadoo barlamaanka uu soo jeediyey codna u qaaday in muddo sedeex sanno ah lagu daro halka xukuumada ay soo jeedinayso muddo sannad ah.
Matt Baught oo aan weydiiyey mowqifka Britain ee ku aadan arrintaas ayaa waxaa uu sheegay in Britain aanay taageeri doonin muddo kordhin aanay la socon barnaamij lagu hiigsanayo isbadel buuxa
Matt Baugh waxa uu sidoo kale ka hadlay, dagaalka ka dhanka ah ururka Al Shabaab, oo ay Dowladda KMG iyo ciidanka Midowga Africa ee taageraya ay sheegayeen in in ay guulo waaweyn ka gareen dagaalka.
Inkastoo uu qirayo in howgalo militari oo keliya aanan looga guulaysanayn kooxaha ka soo horjeeda DKM, haddana Matt Baugh waxa uu sheegayaa in uu rajeynayo in waqtiga dhow la soo afjari doono dagaalada ka dhanka ah kooxda Al Shabaab
Wakiilka Sare ee Britain ugu qaabilsan Somalia waxaa uu fahfaahin ka bixiyey warbixin toddobaadkii hore ay soo saartay Britain oo ay ku sheegtay, inay doonayso in dib ay u furato safaarada ay ku lahaan jireen Muqdisho hadii xaalada Somalia wannaagsanaato.
Wakiilka sare ee Britain ugu qaabilsan Somalia waxaa uu ka hadlay in britain ay kordhisay gargaarka baniaadanimda ee la siinayo Somalia, iyadoo uu xussay in xoghayaha hormarka caalamiga ee Britain Andrew Michael uu bisha febraayo uu ku dhawaaqay in la sedex jabaarayo deeqdii loogu talagalay Somalia, waxaa uuna wakiilka intaas ku daray in UK ay u arkeyso Somalia meel istaraatijiyad muhiim ah u leh ammaanka gobolka iyo kan caalamka guud ahaan.